Dalian River Lake Fishing Tackle Co., Ltd. dia orinasa iray mampiditra R&D, famolavolana, famokarana ary ny varotra. Ny vokarinay lehibe dia amidy amina sehatra e-varotra iraisam-pirenena kilasy voalohany. Manana traikefa mahomby efa ho 10 taona amin'ny varotra an-tserasera izahay. Ny mpanjifanay dia avy any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eoropa, Aostralia, Azia atsimo atsinanana ary firenena sy faritra hafa. Ny vokatray lehibe dia ahitana: hazomainty jiro, jono, jono， Tsipika fanjonoana, fitaovana fanjonoana, kojakoja fanjonoana ary vokatra fanjonoana hafa. Ho an'ny vokatray rehetra, tena mifaninana izahay amin'ny vidiny sy ny fahombiazany.
Manana laza tsara izahay amin'ny fanomezana asa-tanana sy kalitao tsara amin'ny vidiny mirary. Ny iraka ataontsika dia toe-javatra mandresy eo amin'ny mpividy sy izahay.
Fanaraha-maso kalitao sy mari-pankasitrahana
Toy ny jono manjono. Mpanamboatra matihanina maodely famoahana 500+, manana atrikasa famokarana 10.000+ metatra toradroa sy mpiasa mahay 180+ izahay. Manome ny mpanjifa ny vidin'ny orinasa taloha sy ny vokatra avo lenta izahay rehetra, izay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, ary ny santionany dia azo omena haingana amin'ny fotoana rehetra.
Fonosana azo antoka
Ny fomba fonosinay dia mifanaraka amin'ny fomba famonosana an'habakabaka amin'ny varotra iraisam-pirenena. Mampiasa kitapo bubble avo lenta sy baoritra manerantany ho entana izahay. Raha mila fanazavana fanampiny amin'ny antsipiriany, dia andefaso hevitra izahay.
Ny kalitao no votoatin'ny orinasan-tsika an-tserasera, arahin'ny fahombiazana sy ny vidin'ny fifaninanana. Hanompo anao amin'ny kalitao tsara indrindra sy ny hafainganam-pandeha haingana indrindra izahay, mifototra hatrany amin'ny fahitsiana sy ny ivon'ny mpanjifa. Ireo mpanjifa manerantany! Mifandraisa aminay azafady, satria miarahaba anao fatratra izahay. Azafady mifandraisa aminay, satria manantena fatratra ny hiara-miasa aminao izahay!